जब अमिताभ बच्चनको झूट जया बच्चनले समातिन्, दुखी हुँदै भनिन् ‘मलाई यस्तो पटक्कै राम्रो लाग्दैन’ (भिडियो हेर्नुस्) - Khabar Nepali
होमपेज / मनोरञ्जन / जब अमिताभ बच्चनको झूट जया बच्चनले समातिन्, दुखी हुँदै भनिन् ‘मलाई यस्तो पटक्कै राम्रो लाग्दैन’ (भिडियो हेर्नुस्)
बलिउडका मेगास्टार अमिताभ बच्चन फिल्म उद्योगका सबैभन्दा ठूलो सुपरस्टार हुन् । चलचित्रमा मात्र नभई टेलिभिजन क्षेत्रमा पनि कलाकारहरुको दबदबा छ । उनी आफ्नो लोकप्रिय गेम शो कौन बनेगा करोडपतिमा होस्टको भूमिकामा दर्शकको मन पराएका छन्। हालै शोले १ हजार एपिसोड पूरा गर्न लागेको छ ।यो वास्तवमा एउटा उपलब्धि हो र बिग बीले पनि यसलाई विशेष तरिकाले मनाइरहेका छन्। केबीसीको सेटमा भएको १००० औं एपिसोडमा अमिताभकी छोरी श्वेता र नातिनी नव्या नवेली नन्दा पनि पुगेका छन्, जससँग बिग बी निकै रमाइलो गरिरहेको देखिन्छ । यसबाहेक शोको नयाँ प्रोमोमा जया बच्चन पनि शोसँग जोडिएकी छिन् र बिग बीसँग गुनासो गरेको देखिन्छ ।
जया बच्चनलाई बिग बीसँग गुनासो छ
अमिताभ बच्चनको व्यक्तित्व बलियो छ र उद्योगमा उनको शक्ति छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। जताततै उनको सम्मान छ । तर उनको आफ्नै घर भित्र भने उनको कुरा कसैले सुन्दैन, केही चल्र्दन । धेरै पटक अमिताभ बच्चनले केबीसीको स्टेजमा श्रीमती जया बच्चनको अगाडि आफ्नो केही नचल्ने बताए ।
अब अन्ततः त्यो अवसर आयो जब अमिताभ बच्चन र जया बच्चन केबीसीको सेटमा पहिलो पटक आमनेसामने भए। जयाले शोको यस विशेष एपिसोडसँग वस्तुतः सम्बद्ध भइन् र बिग बीको आलोचना गरीन् । सोनी टिभीले आधिकारिक इन्स्टाग्राममा शोको नयाँ प्रोमो साझा गरेको छ, जसमा जया बच्चन नीलो छापिएको साडीमा देखिएकी छन्। भिडियोमा उनले बिग बीको बारेमा गुनासो गर्दै भनेकी छिन् कि तपाईले चाहेको जति फोन कहिल्यै उठाउनु हुन्न ।
त्यसमा बिग बीले बहाना बनाउछन् र भन्छन् कि मेरो नेटवर्क जान्छ, के गरूँ । तर बिग बीको यो चालले काम गर्दैन किनभने हट सिटमा बसेका श्वेता र नव्याले पनि जयको पक्ष लिएर बिग बीलाई जवाफ दिँदै भनेका छन्– सामाजिक सञ्जालमा फोटो राखेर ट्वीट गरिरहनुभएको हुन्छ कसरी नेट चल्दैन ?
जयाले बिग बीको झुट समातिन्
यस बाहेक नव्याले बिग बीलाई पनि घेरेर भनिन्– ‘तिमी नानीको तारिफ सत्यमा गर्छौ कि झुटमा ? यसैमा बिग बीले जया बच्चनलाई भन्छन्–जया तिमी एकदमै राम्रो देखिएकी छौ। तर जयाले जवाफ फर्काएर भन्छिन्– तिमी झुट बोल्दा कत्ति पनि राम्रो लाग्दैनौ ।